Ugaara Dadka Khuuriyo Markay Hurdan | Maan Kaab
Home Caafimaadka Ugaara Dadka Khuuriyo Markay Hurdan
Khuurada waa xabeeb ama dhawaq qallafsan oo dhaca marka hawadu soo dhaafto unugyo dabacsan oo cunahaaga ku jira.
taas oo keenta in unugyada gariiraan inta aad neefsanayso. Ku dhowaad qof walba wuu khuuraa mar-mar iyo ka dib, laakiin dadka qaarkood waxay u noqon kartaa dhibaato joogto ah. Mararka qaarkood waxay sidoo kale tilmaami kartaa xaalad caafimaad oo daran. Intaas waxaa sii dheer, khuuradu waxay dhib ku noqon kartaa lamaanahaaga.
Khuurada waa wax caan ah oo ku dhici karta qof kasta oo inaga mid ah, inkastoo ay ubadan tahay raga iyo dadka cayilan. Khuuradu waxay ka sii dartaa sanadba sanadka ka sii dambeeyo.
Dadka khuuriya habeenki wax dhibaato caafimaad ah kuma hayso, balse waxay dhibaato ku tahay lamaanahaga, hasa yeeshee qofka hadii uu si joogta ah u khuuriyo waxay sabab unoqon karta burburka xiriirka lamaanaha.
Maxaa sababa khuurada
Khuurada waxa sabab u ah marka hawada mareysa afka iyo sanka ay xiranto, waxyaabaha xira hawadaas waxaa ka mid ah
Marinka hawada oo xirma
Qaar dadka kamida waxay khuuriyaan marka uu ku kacsan yahay sanboor ama xasaasiyad, ama marka uu infection kaga dhaco sanka, kala qeybiyaha sanka oo qaloocsama iyo burooyinka ka soobaxa gudaha sanka.
Murqaha cunaha iyo carabka oo daciifsan
Kala baxa murqahan waxay sabab unoqdaan iney xirmaan marinka hawada, waxaana ka dhalata in uu qofku u seexdo si wanaagsn, waxaa kaloo sababa khamriga iyo isticmaalka dawooyinka hurdada qaar ka mid ah, sidoo kale gabowgu wuu sababaa daciifida murqahaan.
Cadka cunaha oo weynaada
Cayilku wuxuu ka dhigi karaa cunahaaga mid weyn oo bararsan sidoo kale caruurta uu bararsan yahay qumankooda wey khuuriyaan
Dalqada Oo Dheer
dhabxanega qeybta jilicsan oo dheer iyo dalqada oo dheer waxaay yareyn karaan qeybta isku xirta sanka iyo cunaha, sidaasna waxaa kuxirma marinka hawada
Dhibaatooyinka caafimaad ee lala xiriiriyo khuurada
Dadka si joogta ah u khuuriya waxay halis ugu jiri karaan xaalada caafimaad oo kamid ah neefta oo ku xiranto waana arin horseedi karta dhibaatooyin caafimaad ookale.
Neefsashada oo khalkhal ku yimaado xiliga hurdada, Hurdada oo marar badan laga soo tooso, in kasto dadka badankood aanay dareemin.
Hurdada oo fudud
qofka oo hurdada ka soo toosa marar badan oo laga soo tooso marar badan waxay kugu sababi karta qofku in aanu seexan hurdo caafimaad leh.
Akhriso: 7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan
Dhibaato soo wajahda wadnaha
neefta oo xiranta xiliga hurdada waxay inta badan sababeysaa in qofku uu ku dhoco dhiigkar iyo faali
tani waxay sabab u noqonaysa in qofku aanu seexan hurdo fiican iyado qofku uu noqonayo qof hurdaysan maalinkii oo dhan taaso hoos u dhigta qofka.
Maxaa Lagu Daweeya
Nasiib xumo ma jirto wax daawo ah oo halmar la cuno taaso joojinayso khuurada laakin waxa jira ficilo aad samayn kartid si aad u yaraysid khuurada waxana kamida
1. Cunto caafimaad leh cun.
2. Cayilka iska yaree.
3. jimicsi asbuucle ah samee si aad u dhistid murqaha jirkaaga.
4. qaab saxan useexo oo ha useexan dhinac dhinac.
5. Ha isticmaalin maandoriyasha iyo khamirga.
6. Iska jooji sigaar cabida.
Previous article7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan